Fihodinana faharoa bakalôrea teknika :: Nolavin’ny minisitry ny Fampianarana ambony ny fangatahan’ireo mpampianatra • AoRaha
Fihodinana faharoa bakalôrea teknika Nolavin’ny minisitry ny Fampianarana ambony ny fangatahan’ireo mpampianatra
Hentitra. Nolavin’ ny minisitry ny Fampianarana ambony ny fangatahan’ireo mpampianatra ao amin’ny sokajy teknika mikasika ny tokony handraisan’ireo mpianatra ao amin’io sokajy io anjara amin’ny fihodinana faharoa amin’ny Bakalôrea manokana, izay nampanante­nain’ny Filohan’ny Repoblika.
“Efa notenenin’ny Filoham-pirenena tamintsika fa noeritreretina ho an’ny mpianatra ao amin’ny sokajy ankapobeny ihany io fanadinana fihodinana faharoa mano­kana io”, hoy ny profesora Blanche Nirina Richard, teny amin’ny Antenimierampirenena Tsimbazaza, omaly.
Nanamafy ihany koa ny minisitra fa tsy noho ny fivoahan’ny laza adina mialoha no hikarakarana an’io fihodinana faharoa fa noho ny fikorontanana naterak’izany tany amin’ireo foibem-panadinana.
“Rehefa manao fanadinam-panjakana tsy maintsy misy laza adina fiandry hatrany ary io no ampiasaina raha misy fivoahan’ny laza adina mialoha. Tao amin’ny sokajy fampianarana ankapobeny no nisy an’izay tranga izay”, hoy ny fanampim-panazavany. Notsindriany fa tsy nisy fivoahan’ny laza adina kosa tamin’ny sokajy teknika.
Niroso tamin’ny fitsarana
“Efa novahana ny olana tamin’ny olan’ny laza adina nifamadika ho an’ny tany amin’ny lisea teknika Alarobia”, hoy hatrany ny minisitra. Notsindriany fa efa eo am-pa­nomanana ny fanatanterahana an’io fanadinana fiho­dinana faharoa io ny minisitera ankehitriny. Vinavinaina hivoaka amin’ny sabotsy ho avy izao rahateo ny valim-panadinana Bakalôrea mba hahafahan’ ireo mpianatra miatrika an’ilay fihodinana faharoa mano­kana hotanterahina amin’ny 23 hatramin’ny 26 oktobra 2019.
Eo anatrehan’izany, niroso tamin’ny fitsarana ny fanadinana ihany ireo mpa­mpianatra tao amin’ny fam­pi­anarana teknika nanomboka omaly maraina. Mbola notazonin’izy ireo anefa ny fanga­tahany. Manantena valin-teny mahafa-po rahateo izy ireo. “Tsy mbola nahazo vaovao mikasika an’izany izahay. Ny fitsarana taratasim-panadinana kosa no efa nanomboka. Nisy tamin’ireo mpitsara aza no efa nahavita ny anjarany”, hoy ny mpampianatra iray.
Fifindrana valanaretina Nidina sivy ambin’ny folo ny tranga vaovaon’ny « Covid-19 »
Hira fiderana Mikarakara ny fifaninanana ny Sky Sound Team
Sekoly Sainte-Famille Naato noho ny fangatahan’ny mpianatra ny fampianarana
Ady amin’ny fanavakavahana :: Nambabo ireo mpijery ny talentan’ ireo manana fahasembanana